मन्त्रीको रजोनिवृत्तिकाल तोकिनुपर्छ
Tuesday, 11.07.2017, 11:01am (GMT5.5)
सरकार निर्बल जनताको सहारा हुनुपर्नेमा सबलले नै फाइदा उठाइरहेको देखिन्छ । राज्यले नै निर्वलको उपेक्षा गर्छ र बलियाले मात्रै फाइदा पाउँछन् भने त्यस्तो राज्यव्यवस्थाले असमानता र विभेद हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन । मूलकुरा भनाई र गराईमा तालमेल भएको व्यवहारबाटै देखिनुपर्छ, भाषणले मात्रै हुँदैन । आजको बढ्दो आर्थिक–सामाजिक असमानता र विभेदको वेग अरु बढ्दै जाने हो भने त्यो भेलले ठूलै अनिष्ट ननिम्त्याउला भन्न सकिदैन । किनभने यहाँ विकासको सट्टा विनाशको संकेत देखिन थालेका छन् । धनी झन धनी र गरीब झन् गरीब हुँदै गएका दृश्य देखिन थालेका छन् । यो बढ्दो विषमताले ढिलो चाँडो समाजमा संघर्ष निम्त्याउन सक्छ ।
यहाँ विचारणीय के छ भने मन्त्रीहरु उपेक्षित–पीडित जनताको उद्धारका लागि कि ठूलाबडा सेठ, ठेकेदार, तस्कर, व्यापारी र अभिजात वर्गका लागि ? सर्वसाधारणका लागि सोच्ने त उनीहरुलाई न फुर्सद छ, न त चासो नै । आफूलाई चुनेर पठाउने जनताका समस्याा र बेथा वेदनालाई अर्को चुनाव नआएसम्म बिर्सेका हुन्छन् । अनि फे िजनतालाई झुक्याउन अनेक दाउ खेल्छन् । यो चक्र निरन्तर चलिरहेको छ । करोडौं जनताप्रतिको दायित्व बोकेका मन्त्रीको यस्तो बेजिम्मेवार व्यवहार हुन्छ भने सर्वसाधारण जनताको उद्धार होला ? स्वार्थसिद्धिका लागि व्यापारी–व्यवसायी मन्त्रीको प्रसंशा गर्छन्, सम्मान गर्छन्, आफ्ना व्यावसायिक प्रतिठानको उद्घाटन गराउँछन्, उपहार चढाउँछन्, मौकामा थैली पनि चढाउलान । मन्त्रीहरु यस्तैमा लठिएका छन् । आफ्ना चाहना र योग्यताको अन्तर नबुझ्नेहरुले गर्दा यहाँ खेलपाटो परेको छ । हुन त समानुपातिक कोटाबाट मन्त्री बनेकालाई जनताको चासो नभएको पनि हुनसक्छ, तैपनि मन्त्रीको दायित्व त्यतिबाट छुट्दैन ।
भनेको सुनिन्छ– “यहाँ राजनीति गर्न कि पैसावाल हुनुपर्छ कि अवसरवादी । यहाँ त प्रजातन्त्रवादी–माओवादी या अर्को कुनै वादीको कुनै अर्थ छैन, ती जनता झुक्याउने नारा मात्रै हुन् ।” राजसंस्थाको अभावमा आजको मूल समस्या भनेको राष्ट्रिय एकतामा चिरापार्ने षड्यन्त्र हो । यस्तो स्थितिमा देशमा एकता स्थापित गर्ने सामथ्र्य भएको द्रष्टा नेतृत्व खै ? यहाँ त सत्ताका भोका गुटवाजी गर्नेहरु मात्रै सल्बलाएका देखिन्छन् । सबै सत्ताकै थुमाजुधाइमा छन् । ती पनि बाहिरकै इशारामा ‘राम कहो पट्टु’ भनेपछि त्यही दोहो¥याउने सुगा जस्ताकै बाहुल्य छ । हो, अपवादका रुपमा शुद्ध आचरणका राष्ट्रवादी पनि छन, तर ती पाखा पारिएका छन् । आज त यहाँ राष्ट्रको एकताको डोरी चुँडाल्न नदिनेभन्दा चुँडाउनमै लागिपरेकाहरुको वर्चश्व देखिएको छ । यो राम्रो लक्षण हैन ।
अहिले नेपालको मन्त्रिमण्डल बसपार्क भएको छ । बस आउनु र जानु जस्तै मन्त्रीहरु आउनु र जानुको निरन्तरतामा कुनै फरक छैन । पटकपटक शपथग्रहणको कर्मकाण्ड गराउनेले र पत्रकारले भने काम पाएका छन् । कर्मचारीलाई चाहिं नयाँ नयाँ मन्त्रीको स्वागतमा घडा थापेर, लाम लागेर कुर्दैमा सास्ती छ । यसै गरी विना उपलब्धि सात दशक बितिसक्दा अब अहिले संघीय नामको राज्यप्रणाली प्रयोग र परीक्षणमा आएको छ । नेताहरु संघको आधार बलियो पार्नुसट्टा आफ्नै भविष्य बलियो बनाउनेमा लागेका हुनाले संघीय व्यवस्थाको आधार बलियो छैन । यसको कारण नेताले वास्तविकताको उपेक्षा गर्नु हो । नेताले घोषणा गर्नासाथ रातारात परिस्थिति बदलिंदैन । नेता हावामा भाषण गर्छन्, उता गाउँको परिस्थिति र जनताको मनस्थिति यथावत छ भने चुनाव गराउँदैमा हुन्छ ? चारहजार गाविसलाई ७४४ मा खुम्च्याउँदा दुर्गमका गाउँलेलाई कति मर्का परेको छ भन्ने नेतालाई अन्दाजै छैन । देशको वास्तविकता विचारै नगरी संघीय व्यवस्था चलाउन सजिलो छैन ।
अहिले एकातिर निर्वाचित स्थानीय निकाय साधन सुविधा विहीन छन्, कार्यालयसम्म पनि स्थापित छैन भने अर्कातिर नेता र मन्त्रीका गुट–फुट र बेइमानीका कारण एकैपटक कम खर्चमा हुनसक्ने चुनाव यहाँ वर्षभरि नै गर्नुपर्ने भयो । राष्ट्रिय सम्पत्ति र समयको वर्वादी मात्रै भएको छ । जनता अब उधारो पत्याउने पक्षमा छैनन्, खाश सुधार देख्न चाहन्छन् । आज पनि भनिरहेका छन्– राजतन्त्र फाल्यौं भनेर के लछारपाटो लाग्यो खै ? भनेर । हुन पनि नेता, तस्कर, व्यापारी, ठेकेदार जस्ता मालामाल भएको देखेका जनताले के पाए त ? भन्दा हातलाग्यो शून्य । अर्कातिर धर्मनिरपेक्षताका नाममा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउने काम भएको छ । साम्प्रदायिक भावना बढ्दै गएमा हत्या, हिंसाको चरण आउन बेर लाग्दैन । हिन्दुस्तान–पाकिस्तान विभाजन साम्प्रदायिकताकै परिणाम थियो । त्यसैले भनिन्छ– नेतृत्वमा दूरदृष्टि हुनुपर्छ भनेर ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नियम पनि दूरदर्शी नेतृत्वमै भरपर्छन् । त्यस्ता नियम पनि सधैं स्थिर र एकैनास रहँदैन, समय–परिस्थिति अनुसार बदलिन्छन् । सन् १९६२ को चीनसितको लडाईमा धक्का खाएपछि भारतले आफ्नो नीतिमा परिवृर्तन ल्याएर रक्षाा र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा प्रगति ग¥यो । आज भारत रक्षा संशाधनमा धेरै अगाडि आइसक्यो । तर, नेपाल ? भारतले बारम्बार नाकाबन्दी गरेर सताउँदा पनि यहाँका काइते नेताका आँखा खुलेनन्, उल्टै उनैको गुलामी गरिरहेका छन् । यसकाा पछाडि नेताका व्यत्तिगत स्वार्थ र चारित्रिक कमजोरीले गर्दा आत्मनिर्भर हुने बाटो खुल्न सकेन । नेताले देशको भविष्य नहेरेर निजी तात्कालिक स्वार्थ मात्र हेरेको दुष्परिणाम हो यो ।
यहाँ अर्को आश्चर्य के छ भने एकै व्यक्ति सधैं अन्त्यहीन प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनिरहनुपर्ने रोग देखिएको छ । जागिरेको सेवा निवृत्तिकाल हुन्छ, महिलाको रजोनिवृत्तिकाल हुन्छ । त्यस्तै मन्त्री हुनेको पनि रजोनिवृत्तिकाल कानुनै बनाएर भए पनि तोक्नुप¥यो । एउटा व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी मन्त्री हुनु भएन । देशमा प्रभावशाली राष्ट्रियस्तरको नेतृत्वको अभाव हुनु भएन । अहिले क्षेत्रीय प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाउनु बाउन्नेलाई अग्लो चुली छुन लगाउनु जस्तै हुन्छ । बलियो इच्छाशक्ति र स्वच्छ चारित्रिक आचरण भएको राष्ट्रियस्तरको नेतृत्वको अनिकालै भएकोा बेलामा प्रत्यक्ष कार्यकारी खोज्नु तानाशाही र अराजक स्थिति निम्त्याउनु हो ।